Kuyini ukubhida kwesikhathi sangempela (i-RTB)? | Martech Zone
Kokubili okuseshwayo okukhokhelwayo, ukubonisa nokukhangisa kwamaselula, kunenqwaba yokusungula ukuthenga okuvelayo kukho. Ukuze uthole imiphumela eqinile, kufanele uhlole ukuthengwa kwamakhulu noma izinkulungwane zenhlanganisela yamagama asemqoka kusesho olukhokhelwayo. Uma wenza ukukhangisa okubonisa noma ukukhangisa kwamaselula, i-inventory ingasakazwa phakathi kwamakhulu noma izinkulungwane zamasayithi noma izinhlelo zokusebenza.
Kuyini Ukubhida Kwesikhathi Sangempela?
Ukuqapha mathupha nokubhida ezindaweni ofisa ukuzikhangisa kuzoba nzima. Ukulungisa lokhu, ukusesha okukhokhelwayo nokuhwebelana ngezikhangiso zisebenzisa ukubhida kwesikhathi sangempela (i-RTB). Ngokubhida ngesikhathi sangempela, umakethi ubeka izingqinamba zokukhangisa kwabo kanye nesabelomali sabo, futhi uhlelo luxoxisana ngokubekwa ngakunye endalini yesikhathi sangempela eyenzeka cishe ngaso leso sikhathi.
I-RTB ingasebenza kahle futhi ibe yingozi. Uma ungeyena umsebenzisi onolwazi, ungahle ungabeki imikhawulo ekuthengweni kwakho kwezikhangiso bese ulahlekelwa isabelomali sakho ngokukhangisa ekuhlanganisweni kwegama elingukhiye elingasebenzi noma kumasayithi angafanele. Kwenziwe kahle, kepha ukusebenza nokusebenza kwe-RTB kudlula kakhulu noma yikuphi ukungenelela okwenziwa ngesandla.
Kuthuthukiswe Kanjani Ukubhida Kwesikhathi Sangempela?
Amapulatifomu we-Big Data angakhipha futhi aguqule izigidi zamarekhodi nesikhathi sangempela - kufaka phakathi idatha yokuguqula - asiza ukuqhubekisela phambili i-RTB ngale kokunciphisa nje izindleko zebhidi nokwandisa amanani wokuchofoza. Ngokuhlaziya idatha yokuguqulwa ngesikhathi sangempela, izihambeli zezivakashi, kanye nokuziphatha okwenziwa ngamakhompiyutha, amapulatifomu e-RTB akwazi nokubikezela ngokunembile ukubekwa kwesikhangiso esifanele, ngesikhathi esifanele, phambi komuntu ofanele, kudivayisi efanele.
Sikhulume ngamakhono wokubhida wesikhathi sangempela ku- Ukukhangisa kohlelo ku-podcast yethu yakamuva noPete Kluge. Qiniseka ukuthi ulalela i-podcast - bekungxoxo enhle.
Lalela Ingxoxo yethu kaPete Kluge we-Adobe
Konke Odinga Ukukwazi Ngokubhida Kwesikhathi Sangempela
Nasi ukubuka konke okuningiliziwe kwe-Real-Time Bidding ku-infographic.
Ividiyo evela ku- MediaMath.
Tags: ukushintshaniswa kwezikhangisokhangisaukhokha ngokuchofoza ngokukodwappcibhidi yangempela yesikhathirtb